Mudane Sulaymaan ?waxan rajo ka qabnaa in dhaqso dalka loo soo gaarsiiyo dhaqaalihii New deal-ka? – Radio Daljir
Diseembar 9, 2013 3:06 b 0
Muqdisho, December 9, 2013 – Wasaaradda maaliyada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa rajo ka qabta in si dhaqso ah dalka loo soo gaarsiiyo dhaqaalihii loogu yaboohay Soomaaliya bishii September iyo shirkii Brussels ee New deal.
Wasiirka maaliyada ee Soomaaliya Maxamuud Xasan Sulaymaan oo muqdisho kula hadlay weriyaasha, wuxuu sheegay in ay Soomaaliya ku rajo wayn tahay in la soo gaarsiiyo dhaqaalihii loo balan-qaaday.
?wax badan oo horumarinta bulshada ah ayaa looga qayb qaadan lahaa, mashaariic badan ayaa dalka ka furmi doona, marka lacagtu na soo gaarto.? Ayuu yiri wasiirka maaliyada ee xukuumada shaqada ka tegaysa Maxamuud Xasan Sulaymaan.
Mudane Sulayan waxaa uu ka warbixiyey shirar uu kaga qayb-galay France iyo beljium oo looga hadlayey horumarinta Afrika, isla markaasna si wayn loogu soo qaaday dalka Soomaaliya oo ka mid ah meelaha u baan soo kabashada ee qaaradan